लगानी | गृहपृष्ठ - Part 2
सिद्धार्थ इक्विटी फण्डको नाफा ४ लाख ४२ हजार
लगानी 38 views
फागुन ११, काठमाडौं (अस) । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले माघ मसान्तमा रू. ४ लाख ४२ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । योजनाको नाफा गत मसान्तको तुलनामा घटेको हो । गत मसान्... बिस्तृतमा
सेञ्चरीको मूल्य समायोजन
लगानी 48 views
फागुन ११, काठमाडौं (अस) । सेञ्चरी कर्मशियल बैङ्कको ५ प्रतिशत बोनस शेयरको समायोजनपछि मूल्य रू. १ सय ९३ तोकेको छ । नेप्सेले बैङ्कको आधार मूल्य रू. २ सय ६३ लिएको हो । बिस्तृतमा
मुख्य खबर, लगानी 134 views
कम्पनीले सार्वजानिक गरेको चालू आव २०७४/७५को दास्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार रू. १७ करोड ८ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको आम्दानी ९४ प्रतिश... बिस्तृतमा
लगानीकर्ता प्रोफिट बुकिङतर्फ लाग्दा नेप्से स्थिर
मुख्य खबर, लगानी 84 views
फागुन १०, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक स्थिर भएर बन्द भएको छ । कारोबार भएको आधा घण्टादेखि घट्न थालेको बजार तेस्रो घण्टामा बढेको थियो । बजार बढेर १ हजार ३ सय ९५ दशमलव १३ विन्दु... बिस्तृतमा
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपीओ शुक्रवारदेखि
मुख्य खबर, लगानी 559 views
फागुन १०, काठमाडौं । सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीले शुक्रवारदेखि पहिलो चरणको आइपिओ विक्री खुला गर्दैछन् । यी दुवै कम्पनीले पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम सञ्... बिस्तृतमा
कारोबारको तेस्रो घण्टामा बढ्यो नेप्से (२ बजेको अपडेट)
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक कारोबार भएको तेस्रो घण्टामा शून्य दशमलव ३० प्रतिशलते बढेको छ । कारोबार भएको आधा घण्टादेखि घट्न थालेको बजार तेस्रो घण्टामा ४ दशमलव २... बिस्तृतमा
ओरियण्टल इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन ४५ करोडभन्दा बढी
लगानी 18 views
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ४५ करोड २० लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षभन्दा ५ दशमलव ५८ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको... बिस्तृतमा
०.३२ प्रतिशत घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । साताको अन्तिम दिन कारोबार भएको दोस्रो घण्टाको अवधिमा नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ३२ प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएको आधा घण्टादेखि घट्न थालेको बजार दोस्रो घण्टासम्ममा... बिस्तृतमा
सेञ्चुरीको १० प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन
मुख्य खबर, लगानी 61 views
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । सेञ्चुरी कमर्सियल बैङ्कको १० प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ । सेञ्चुरीले अल्पाइन डेभलपमेण्ट बैङ्क र सेती फाइनान्ससँगको एक्विजिसन र ४० प्रत... बिस्तृतमा
नबिल इक्वीटी फण्डको ८३ करोड शेयरमा लगानी
लगानी 43 views
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । नबिल म्युचुअल अन्तर्गत सञ्चालन हुने नबिल इक्वीटी फण्ड–१ ले माघ मसान्तमा रू. ८३ करोड ४९ लाख शेयरमा लगानी गरेको छ । योजनाले सो रकम शेयर, ऋणपत्र र मुद्धती निक्षेपमा गर... बिस्तृतमा